Izizathu ezi-5 zokungalayishi umculo noma amavidiyo wakho kumuntu wesithathu | Martech Zone
Izizathu ezi-5 zokungalayishi umculo noma amavidiyo wakho kumuntu ovela eceleni
NgeSonto, Septhemba 24, 2006 NgoMgqibelo, ngoMashi 31, 2007 Douglas Karr
Bangaki kini abafunda “Imigomo Yokusebenzisa”? Uma uhlinzeka ngokuqukethwe ngomuntu wesithathu, ungahle uthande ukukucabanga kabusha. Amathuba ukuthi anamalungelo aphelele, angenabukhosi, okuphatha nokusabalalisa okuqukethwe kwakho ngaphandle kokukunxephezela ngakho. Uma uzobhekana nenkinga yokusika ividiyo, i-mp3, iPodcast, njll. sebenzisa imali bese uyisingatha ngokwakho. Ngaleyo ndlela akudingeki uvume eminye yale Migomo Yokusetshenziswa eyinqaba ezovumela inkampani ethile enkulu ukuthi yenze imali ENINGI KAKHULU ngokuqukethwe kwakho.
Uma ulayisha ividiyo ku-Youtube futhi i-Youtube ithola isigidi sayo ... uvele ufake imali ephaketheni labo! Kungani ungakwenza lokho?
I-YouTube - ngalokhu unikeza i-Youtube ilayisensi yomhlaba wonke, engakhethi bunye, engenamali, engabhaliswa futhi edluliswayo yokusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukusabalalisa, ukulungiselela imisebenzi esuselwe kuyo, ukubonisa, nokwenza okuthunyelwe komsebenzisi ngokuhlobene neWebhusayithi ye-Youtube kanye neYouTube (futhi owalandela) ibhizinisi lakhe, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo wokwazisa nokusabalalisa ingxenye noma yonke iWebhusayithi ye-Youtube (nemisebenzi etholakala kuyo) kunoma yiziphi izindlela zabezindaba nanganoma yiziphi iziteshi zemidiya.
I-Google - uqondisa futhi ugunyaza iGoogle, futhi unikeza iGoogle ilungelo elingenabukhosi, nelungelo elikhethekile nelayisense, ukusingathwa, ukulondolozwa kwesikhashana, umzila, ukudlulisa, ukugcina, ukukopisha, ukuguqula, ukusabalalisa, ukwenza, ukubonisa, ukulungisa kabusha, ukucaphuna, yenza lula ukuthengiswa noma ukuqashwa kwamakhophi, ahlaziye, futhi adale ama-algorithms asuselwa kokuqukethwe okugunyaziwe ukuze (i) ngisingathe okuqukethwe okugunyaziwe kumaseva we-Google, (ii) sikhombe okuqukethwe okugunyaziwe; (iii) ibonise, yenze futhi isabalalise okuqukethwe okugunyaziwe
I-MySpace - Ngokukhombisa noma ngokushicilela ("ukuthumela") noma yikuphi okuqukethwe ku-MySpace Services noma ngokusebenzisa i-MySpace Services, ngaleyo ndlela unikeza i-MySpace.com ilayisense elinganiselwe yokusebenzisa, ukuguqula, ukwenza obala, ukubonisa obala, ukukhiqiza kabusha, nokusabalalisa lokho okuqukethwe kuphela ku ngokusebenzisa Izinsizakalo ze-MySpace.
I-FLURL - Ngalokhu unikeza i-Service ilayisense elingakhethi ukushicilela, ukumaketha, ukuthengisa, ilayisense, ukuxhaphaza, nokusebenzisa nganoma iyiphi indlela, zonke izinto ezinikezwe i-Service, i-Web Site, kanye / noma ezisetshenziswe nganoma iyiphi indlela ne-Service, kufaka phakathi kodwa kukhawulelwe emculweni, ezithombeni, ezintweni ezibhaliwe, ubuciko, amagama, izihloko namalogo, izimpawu zokuhweba, nenye impahla ebhaliwe. Ngeke ukhokhelwe ngokulayisha noma enye into enikezwe Isevisi.
IDropShots - IDropShots, ngaphandle kwalapho kushiwo ngenye indlela, ingumnikazi wawo wonke amalungelo obunikazi ne-database ku-Service nokuqukethwe kwayo. Awukwazi ukushicilela, ukusabalalisa, ukukhipha, ukusebenzisa kabusha noma ukukhiqiza kabusha noma yikuphi okuqukethwe okunjalo nganoma iyiphi indlela ebonakalayo (kufaka phakathi ukukopisha noma ukukugcina nganoma iyiphi indlela ngezindlela zikagesi) ngaphandle kokuhambisana nelayisense lokusebenzisa elinganiselwe elichazwe esazisweni selungelo lethu lobunikazi.
Yeka ukunikeza okuqukethwe kwakho mahhala! Izinkampani ezinkulu zithembisa ukuthi NGEKE usebenzise okuqukethwe kwakho ngaphezu kokusatshalaliswa ngewebhusayithi. Izinkampani ezinkulu zizohlinzeka ngesinxephezelo uma zisebenzisa okuqukethwe kwakho ngaphandle kwesayithi. Futhi izinkampani ezinkulu zizokuvumela ukuthi uqhubeke nokuba NE-OWN okuqukethwe kwakho - noma ngabe ushiye insizakalo yabo.
Funda Imigomo Yokusebenzisa!
Kubuyekezwe Ikhasi Lokufunda
Ubuchwepheshe bumahhala, izinsiza kusebenza azikho…
Sep 24, 2006 ngo-9: 58 PM
Okuthunyelwe okuhle. Iyini imicabango yakho ku-Revver.com, ehlukanisa imali etholwe kokuqukethwe kwakho nawe?
Sep 24, 2006 ngo-10: 16 PM
Njengamanje ngithola iphutha leskripthi elingu-500 kusayithi labo…
Ngizohlola imigomo yokusetshenziswa uma seyenziwe isipele. Angiyena ummeli - ngimane ngibone izindatshana eziningi nezingxoxo ezikhuluma ngalezi zihlanganisi zokuqukethwe ezibatshela kabi abasebenzisi bazo ukuthi ngubani ongumnikazi wokuqukethwe, ukuthi kungasetshenziswa kanjani nokuthi umnikezeli wokuqukethwe anganxeshezelwa noma cha. ukusetshenziswa.
Sep 25, 2006 ngo-2: 23 PM
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, uDoug.
Ikakhulukazi ngokubheka ukuthi ngisho nokusingathwa kwabezindaba okunothile akusabizi ngengalo futhi umlenze… (Lapha ngingancoma I-MediaTemple engishintshele kuyo ngemuva kokuthembeka kumhlinzeki wami wokuqala weseva cishe iminyaka eyi-5. Banokwaneliseka kwamakhasimende okuphezulu kakhulu, futhi ngamangala ngejubane abaphendula ngalo kuma-imeyili wamakhasimende angewona ama-geeky. (Futhi cha, angiqashiwe yibo…)
Esinye isizathu sokungakubambeli okuqukethwe kwakho enkampanini yesithathu ukuthi, ngeke wazi ukuthi bayishintsha kanjani imigomo yabo ngokuzayo - kahle, noma awazi ukuthi uyishintsha kanjani eyakho… (Cabanga ukuthi wenza ividiyo / ingoma epholile oyifakile online, kanti esinye isikhungo sokumaketha sifuna ukukuthengela sona - ngeke ukwazi ukusithengisa uma usuvumelene nemigomo uDoug ayibekile…)
Ngakho-ke: zisingathe. Jabula. Yiba nobuciko.
Futhi njenge-plug, nanka amanye amavidiyo engiwasusile.
Mar 24, 2007 ku-11: 03 AM
Bengifuna ukuphawula ngokushesha ngendatshana yakho. Kudos kuwe ngokukhuthaza abaculi abacabanga ukuhambisa imidiya yabo kumsingathi / umhambisi wesithathu. Ngempela, abantu abaningi abanobuciko bayehluleka ukubheka izinto zebhizinisi nezomthetho embonini yezikaqedisizungu kanye nempahla enobuhlakani bengqondo, futhi kungaba lula kubantu abangosomathuba - kungaba abaphathi, ama-ejenti, amalebula okuqopha (amakhulu noma amancane), noma abasebenza kuwebhusayithi - sisebenzise labo abangenalo ulwazi lwebhizinisi noma ukuqonda okuyisisekelo komthetho we-copyright wase-US.
Lokho sekushilo, abashicileli nabasabalalisi benkampani yangaphandle bashiye bengenakho ukukhetha ngaphandle kokufuna ukuthi abanikazi be-copyright banikeze umuntu wesithathu okungakhethi ilayisense lamalungelo athile ophethe i-copyright (umculi), Inter aliaamalungelo okuzala kabusha, okusabalalisa, nokuveza obala okokusebenza okune-copyright. Ngaphandle kwalokho, umshicileli wenkampani yangaphandle ubhekene nesikweletu sokwephulwa kwe-copyright. Kungakho ulimi kulezi zivumelwano esishiwo ngenhla zezivumelwano zokusebenzisa lufana (futhi iwebhusayithi yethu ngokuqinisekile ayihlukile).
Uma umshicileli ovela eceleni efuna i- Okukhethekile ilayisense, lokho-ke kuyasolisa, futhi leyo nsizakalo kufanele igwenywe, kuya ngezimo.
UMoya weRadio LLC
Ngo-Apr 23, i-2007 ku-4: i-05 PM
Ngabe umuntu ubamba kanjani ividiyo yakhe noma i-podcast? Nginamavidiyo kuwebhusayithi yami kepha ngithola kanjani ukuthi uquqaba lwabantu alubone?
Ngo-Apr 26, i-2007 ku-2: i-07 PM
Sicela usitshele ukuthi yiziphi izinkampani ezinkulu okhuluma ngazo ekugcineni kokuthunyelwe kwakho! Ungishiya ngilenga! Ngingathanda ukugcina wonke amalungelo ngomculo wami, kepha ngiphoqelekile ukusebenzisa izindlela ezithile ukuthola iqiniso elilula lapho izilaleli zilele khona.
Kwenzeka ukuthi ngicabange amasayithi okwakhiwa kwezenhlalo, ama-REAL, afana ne-thop.net ayizizathu ezivuthiwe zokuhlakazeka kwabezindaba okulawulwa ngabaculi. Ngalesi sikhathi lowo akanalo ikhono lokusingathwa komculo, kepha uvumela izixhumanisi ezishumekiwe kumasayithi wokuqukethwe afana ne-YouTube. Ngine-akhawunti ye-MySpace exhunywe ne-SnowCap, ngakho-ke ngingabeka intengo yengoma, bese beyimaka. Bengilokhu ngidlala ngalo futhi ngidinga ukuvezwa okwengeziwe, ngakho-ke kufanele ngicabange ukusingatha umsebenzi wami kwenye indawo. Amasayithi amakhulu abonakala esengozini yokugcwaliswa futhi agcwele ngokuphelele kuvidiyo ngomsindo kuphela.
Ngo-Apr 26, i-2007 ku-5: i-13 PM
Zonke izinkampani ezinkulu bezilokhu zishintsha imigomo yokusetshenziswa kwazo futhi ziyaqhubeka nokwenza njalo. Kungadinga ukubuyekezwa okuqhubekayo. Ngixwayisa abantu kuphela ukuthi kufanele babuyekeze yonke imigomo yokusebenzisa ngaphambi kokulayisha noma yini 'abacabanga' ukuthi banayo. Ngingakuzonda ukubona umuntu elahlekelwa amalungelo omculo noma ividiyo yakhe ngokumane ayilayishe kuseva… lapho omunye umuntu angenza khona inzuzo yayo!
Aug 22, 2008 ku-5: 53 AM
Nansi enye i-Kiqlo evumelekile
U-Kiqlo akanayo intshisekelo yokuthola amalungelo ngokuqukethwe kwakho. I-Kiqlo ikuvumela ukuthi uthengise okuqukethwe kwakho ngenkathi ugcina i-copyright yakho. Ungayilayisha mahhala, uyithengise mahhala futhi uKiqlo akayikunqamula. Iqiniso! Akukho Ukubamba!
Ungalanda, ulayishe ngaphandle kokungena ngemvume. Uma ufuna ukuthengisa udinga ukungena ngemvume. Kungumqondo omusha kepha wenzelwe le nhloso.
Okthoba 21, 2008 ngo-2: 25 AM
Sicela usazise ukuthi ucabangani nge-Ourstage.com. Mina nomkami sobabili singababhali bezingoma futhi sibeke izingoma ezimbalwa esizeni sabo. Izinsuku ezimbalwa zokuqala sibekwe kwabangu-10 abahamba phambili kwabambalwa abaya kwinombolo eyodwa esifundeni sethu futhi ngemuva kwezinsuku ezi-4 kuya kwezi-5, zonke izingoma zethu zehlela ezansi noma maphakathi kokulinganiswa futhi ukuvotelwa kwezingoma zethu akuwenzi yenza ukukhotha komqondo komunye wethu ?? Bathi wonke amalungelo ahlala engawethu nokuthi konke ukuthengisa kuzoya ku-akhawunti yethu ye-paypal kodwa kuze kube manje asikenzi ipeni legazi ezingomeni zethu esizithumele. Ngabe siyathathwa? Ngisifundile iningi lesivumelwano kepha hhayi sonke. Ngicabanga ukuthi konke bekuphakama kodwa phezulu ngemuva kokufunda izizathu zakho ezinhlanu angiqiniseki kangako?
Siyabonga ngebhulogi yakho. Ube nosuku oluhle futhi kwangathi ungazizwa izibusiso zempilo nothando ezikuphathele zona usuku nosuku.
Ngegama laKhe elibusisiweyo,
Nov 18, 2009 ngo-10: 13 PM
Ngakolunye uhlangothi ungalayishi umculo wakho noma yikuphi futhi waziwe impilo yakho yonke!
Yebo, funda njalo imigomo nemibandela (uzothembela kakhulu ukuthi ungakwenzi) futhi isikhathi esiningi lokhu ngeke kuhlukunyezwe.
Ngicabanga ukuthi kuyindaba yokunikeza okuncane ukuze uthole okuncane, awunakulindela ukuvezwa ngaphandle kokuziveza (uthethelele isisho) Ngingumqambi obhalela iTV / ifilimu, ngiyakwazi ukuziphilisa kahle ngakho futhi bengingeke ngikwazi ngibe sethubeni lesihogo ukube bengingathembanga abantu ukuthi bangasebenzisi kabi ukholo lwabo engilubeke ngokunikeza umculo wami. (futhi kusamele ngikwenze lokhu ngaso sonke isikhathi, ngaphandle kwalokho umsebenzi uzoma)
Ukuhlukumezeka kakhulu komculo wami kwenzeke ngemuva kokuthi umculo wami ususakazwa ku-TV wase ukhuphuka uyothengiswa ngokusemthethweni ku-iTunes njll, omunye umuntu wanquma ukuwuthenga wabe esewufaka ku-fanite wohlelo lwe-TV owawuvela kulo, mahhala.
Ngikhokhelwa yi-youtube lapho kudlalwa umculo wami ngoba leyo yindlela esebenza ngayo, hhayi njengoba kusho i-athikili (ngiyilungu lomphakathi oqoqayo oqinisekisa lokho) i-PRS
Ngakho-ke ngicela ungakhishwa yile ndatshana.
Dec 4, 2009 ku-12: 27 AM
Ngabe ucabanga ukuthi abantu bazothutheleka kwisiza sakho engxenyeni ene-back-back ye-inthanethi ukubona amavidiyo ambalwa? Abantu baya ku-Youtube nakwamanye amasayithi ngoba athandwa futhi abantu banamathuba amaningi okubona okuqukethwe kwabo. Ngingasho ukuthi ama-80% + wabantu abalayishayo akanandaba ukuthi bayayisebenzisa noma cha, ngiyazi ukuthi anginayo. Impela bathola amahhala esizeni sabo, kepha lelo ibhizinisi labo. Ubungeke ulayishe kubo uma bengatholi ama-hits. Ukuphela kwendlela yokuthenga isiza nokuthola ilungelo lobunikazi kokuqukethwe kwakho uma uliqembu elaziwayo, elidumile elikhiqiza amavidiyo amaningi kanye / noma izithombe. Ngaphandle kwalokho umane ushaya uphondo lwakho futhi uzama ukubaluleka.